UNGACHINJA SEI OPENDNS KANA GOOGLE DNS PAWINDOWS - NYORO
Ungachinja sei OpenDNS kana Google DNS paWindows
Iko yako internet kumhanya yanga ichikupa iwe hope dzekurota sekupedzisira? Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchichinjira kuOpenDNS kana Google DNS kuitira kuti yako internet ikurumidze zvakare
Kana mawebhusaiti ekutenga asingatakure kumusoro zvakakwana kuti iwe uwedzere zvinhu kungoro yako zvisati zvapera, mavhidhiyo akanaka ekati nembwa haawanzo kutamba asina kubhaiza paYouTube uye zvakajairika, iwe unopinda zoom yekufona zvikamu neako wekure-kure wawakaroorana naye asi unongovanzwa vachitaura apo iyo skrini ichiratidza kumwe chete kumeso kwavakaita 15-20 mins apfuura ipapo inogona kunge iri nguva yekuti iwe uchinje yako Domain Name System (zvinowanzo pfupikiswa seDNS).
windows module yekuisa mushandi yakakwira disk mashandisiro
Chii chinonzi Domain Name Sisitimu iwe yaunobvunza? Iyo Domain Name System yakafanana nebhuku renhare re internet, ivo vanoenderana mawebhusaiti kune avo anoenderana IP kero uye kubatsira pakuzviratidza pachikumbiro chako, uye kushanduka kubva kune imwe DNS server kuenda kune imwe hakugone kuwedzera kukurumidza kwako kubhurawuza uye zvakare kuita internet kufambisa pane yako system zvakanyanya kuchengetedzeka.
Ungachinja sei OpenDNS kana Google DNS paWindows?
Chii chinonzi Domain Name System?
Nzira yekushandura Domain Name System (DNS) paWindows 10?
Maitiro 1: Uchishandisa Control Panel
Maitiro 2: Uchishandisa Command Prompt
Maitiro 3: Uchishandisa Windows 10 Zvirongwa
Chinja ku OpenDNS kana Google DNS paMac
Muchikamu chino, tichakurukura zvakafanana, enda pamusoro pezvimwe zviripo zveDNS server sarudzo uye dzidza maitiro ekuchinjira kune inokurumidza, iri nani uye yakachengeteka Domain Name System paWindows neMac.
Semazuva ese, isu tinotanga nekudzidza zvishoma pamusoro penyaya irimo.
Iyo internet inoshanda pane IP kero uye kuti iite chero mhando yekutsvaga paInternet imwe inoda kuisa izvi zvakaoma uye zvakaoma kurangarira akateedzana manhamba. Domain Name Sisitimu kana DNS, sezvambotaurwa, inoshandura IP kero kuita nyore kurangarira uye zvine musoro mazita emazita atinowanzopinda mubhawa rekutsvaga. Maitiro mashandiro eDNS server nguva dzese dzatinonyora muzita rezita, sisitimu inotsvaga / mepu izita rezita kune inoenderana IP kero uye inoidzosera kuwebhusaiti yedu.
Domain names masisitimu anowanzo kupihwa needu evashandi veinternet service (ISPs). Iwo maseva avanogadzika anowanzo gadzikana uye akavimbika. Asi izvi zvinoreva here kuti ndidzo zvakare dzinokurumidza uye dzakanakisa maseva eDNS kunze uko? Kwete hazvo.
Iyo default DNS server yawakapihwa inogona kuvharwa netraffic kubva kune vakawanda vashandisi, kushandisa imwe isingashande software uye pane yakakomba katsamba, inogona kunge iri kuteedzera yako internet chiitiko.
Neraki, iwe unogona kuchinjira kune imwe, yakawanda yeruzhinji, nekukurumidza uye yakachengeteka DNS server nyore nyore pamapuratifomu akasiyana siyana. Mamwe emaseva eDNS anozivikanwa uye anoshandiswa kunze uko anosanganisira OpenDNS, GoogleDNS uye Cloudflare. Chimwe nechimwe chazvo chine zvazvakanakira nekuipira.
Cloudflare DNS maseva (1.1.1.1 uye 1.0.0.1) anorumbidzwa semaseva anomhanyisa nevanoyedza akawanda uye zvakare akavaka-mune ekuchengetedza maficha. Nemaseva eGoogleDNS (8.8.8.8 uye 8.8.4.4), iwe unowana vimbiso yakafanana neiyo yekukurumidza webhu kubhurawuza ruzivo neakawedzera maficha ekuchengetedza (All IP matanda anobviswa mukati maawa makumi mana). Chekupedzisira, isu tine OpenDNS (208.67.222.222 uye 208.67.220.220), imwe yeakare uye akarebesa anoshanda maSeva eDNS. Nekudaro, OpenDNS inoda kuti mushandisi agadzire account kuitira kuti awane sevha uye nehunhu hwayo; izvo zvakanangana nekusefa kwewebhusaiti uye kuchengetedzeka kwemwana. Ivo zvakare vanopa akati wandei akabhadharwa mapakeji aine mamwe maficha.
Mamwe mapava eDNS mavhavhari aungade kuedza iwo maQuad9 maseva (9.9.9.9 uye 149.112.112.112). Izvi zvakare zvinopa mukana kune inokurumidza kubatana kubatana uye chengetedzo. Iyo yekuchengetedza system / yekutyisidzira njere inonzi inokweretwa kubva kunopfuura gumi nemaviri anotungamira makambani ekuchengetedza cyber pasirese.
Uyezve Verenga: 10 Yakanakisa Veruzhinji DNS Seva muna 2020
Pane nzira shomanene (nhatu dzakanyatsojeka) kuchinjira kuOpenDNS kana Google DNS paWindows PC yatichave tichivhara mune ino chinyorwa chinyorwa. Yekutanga inosanganisira kushandura maratidziro eadapter kuburikidza nepaneti yekudzora, yechipiri inoshandisa iyo yekuraira Prompt uye nzira yekupedzisira (uye pamwe iri nyore pane ese) yatinotungamira kupinda mukati windows windows. Okay pasina kumwe kunonoka, ngatinyurire mukati mayo izvozvi.
1. Sezviri pachena, tinotanga nekuvhura control panel pane edu masisitimu. Kuti uite kudaro, tinya Windows kiyi pane yako keyboard (kana tinya pane yekutanga menyu icon pane yako taskbar) uye nyora control panel. Paunenge wawanikwa, rova ​​pinda kana tinya paVhura mune kurudyi pani.
2. Pasi peDanho rePaneru, tsvaga Network uye Kugovana Center uye tinya zvakafanana kuti uvhure.
Ongorora: Mune imwe vhezheni yechinyakare yeWindows, iyo Network uye Sharing Center inosanganisirwa pasi peNetwork neInternet sarudzo. Saka tanga nekuvhura iyo Network neInternet hwindo uye tsvaga & tinya paNetwork uye Sharing Center.
3. Kubva kuruboshwe-kuruboshwe, tinya Chinja Adapter Zvirongwa inoratidzwa pamusoro pechinyorwa.
4. Muchiratidziro chinotevera, iwe uchaona runyorwa rwezvinhu system yako yakambobatana neiri kana parizvino yakabatana nayo. Izvi zvinosanganisira kubatana kweBluetooth, ethernet uye wifi kubatana, nezvimwe. Dzvanya-kurudyi pane zita reinternet network yako uye sarudza Zvivakwa .
5. Kubva pane zvinyorwa zvezvinhu zvakaratidzwa, tarisa uye sarudza Internet Protocol Shanduro 4 (TCP / IPv4) nekudzvanya pakanyorwa. Kana uchinge wasarudzwa, tinya pane iyo Zvivakwa bhatani mupaneru rimwe chete.
6. Apa ndipo patinopinda kero yeyedu yakasarudzika DNS server. Kutanga, ita sarudzo yekushandisa yakasarudzika DNS server nekudzvanya pa Shandisa anotevera DNS server kero .
7. Zvino pinda yako Yakasarudzika DNS server uye imwe DNS server.
Inesarudzo Nhanho: Iwe unogona zvakare kuve neanopfuura maviri maDNS kero panguva imwe chete.
a) Kuti uite kudaro, kutanga, tinya pane iyo Yepamberi ... bhatani.
kubvarura / online / kuchenesa-mufananidzo / kudzorera hutano kwakundikana
b) Tevere, chinja kune iyo DNS tabo uye tinya pa Wedzera…
c) Mune inotevera pop-up bhokisi, nyora kero yeDNS server yaungade kushandisa uye pinda pinda (kana tinya pa Wedzera).
8. Pakupedzisira, tinya pane iyo Zvakanaka bhatani kusevha shanduko dzese dzatangoita wobva wadzvanya pairi Vhara .
Iyi ndiyo nzira yakanakisa yeku chinja ku OpenDNS kana Google DNS pa Windows 10, asi kana nzira iyi isiri kukushandira iwe unogona kuedza nzira inotevera.
1. Isu tinotanga nekumhanya Command Prompt seMubati. Ita saizvozvo nekutsvaga Command Prompt mune yekutanga menyu, tinya-kurudyi pazita uye sarudza Mhanya seMutungamiriri. Neimwe nzira, tinya iyo Windows kiyi + X pane yako keyboard panguva imwe chete uye tinya pa Raira Kukurumidza (Admin) .
2. Nyora rairo netsh uye tinya pinda kuti uchinje Network Zvirongwa. Tevere, nyora mukati inowanikwa kuratidza interface kuti uwane mazita ema network adapters.
Zvino, kuti uchinje sevha yako yeDNS, nyora unotevera kuraira uye pinda pinda:
interface ip set dns name='Interface-Name' source='static' address='X.X.X.X'
Murairo iri pamusoro, kutanga, shandura Chinongedzo-Zita nezita rako rekushandura iro ratakawana muzita rapfuura uye rinotevera, chinja XXXX ine kero yeDNS server yaungade kushandisa. IP kero yemaseva akasiyana eDNS anowanikwa mune nhanho 6 yenzira 1.
chimiro chinogadziridza windows 10, vhezheni 1803 - kukanganisa 0x8007065e
4.Kuwedzera imwe DNS kero ye server, nyora unotevera kuraira uye rova ​​pinda.
interface ip inowedzera dns zita = Chinongedzo-Zita rinowedzera = XXXX index = 2
Zvekare, chinja Chinongedzo-Zita iine zita rakanangana uye XXXX pamwe neimwe DNS server kero.
5. Kuwedzera mamwe maDNS maseva, dzokorora wekupedzisira kuraira uye kutsiva index kukosha ne3 uye wedzera index kukosha ne1 pane imwe neimwe nyowani nyowani. Semuyenzaniso interface ip inowedzera dns zita = Chinongedzo-Zita rinowedzera = XXXX index = 3)
Uyezve Verenga: Maitiro ekuisa VPN paWindows 10
1. Vhura Zvirongwa nekuzvitsvaga mubha yekutsvaga kana kudzvanya Windows kiyi + X pane yako keyboard uye nekudzvanya pane Zvirongwa. (Zvimwewo, Windows Kiyi + ini ichavhura zvakananga marongero.)
2. Mune maWindows windows, tsvaga Network & Internet uye tinya kuti uvhure.
3. Kubva pane runyorwa rwezvinhu zvinoratidzwa mune yepaneru pani, tinya Wifi kana Ethernet zvinoenderana nekuti iwe unowana sei yako internet kubatana.
4. Zvino kubva kurudyi-padanho repaneru, tinya kaviri pane yako network kubatana zita kuvhura sarudzo.
5. Tsvaga musoro wenyaya IP marongero uye tinya pane iyo Hora bhatani pasi pechiratidzo.
6. Kubva pakudonha kunoonekwa, sarudza Handbook kukwanisa kushandura manyore kune rimwe dura reDNS.
7. Zvino chinja pa IPv4 chinja nekudzvanya pane iyo icon.
8. Pakupedzisira, nyora iyo IP kero yeunofarira DNS server uye imwe DNS server mumabhokisi ezvinyorwa akanyorwa zvakafanana.
(IP kero yemaseva akasiyana eDNS anowanikwa mune nhanho 6 yenzira 1)
9. Dzvanya pa Sevha , vhara marongero uye ita komputa kutangazve kunakidzwa nekukurumidza webhu kubhurawuza ruzivo pakudzoka.
Kunyange iri nyore pazvitatu, nzira iyi ine zvayakatadzisa. Iyo rondedzero inosanganisira yakaganhurirwa (maviri chete) eDNS kero munhu anogona kupinda (nzira dzakurukurwa pakutanga ngadzitore mushandisi awedzere akawanda maDNS kero) uye nenyaya yekuti kumisikidza nyowani kunongoshanda chete kana system restart yaitwa.
Tichiri pazviri, isu zvakare tichakuratidza maitiro ekuchinjisa yako DNS server pane mac uye usanetseke kwete, maitiro acho ari nyore kwazvo achienzaniswa neaya ari paWindows.
1. Tinya paApple logo kukona yekuruboshwe yekona yako yekuvhura iyo Apple menyu uye enderera nekudzvanya pa Zvawada System ...
2. MuMenu yeSarudzo yeMenu, tsvaga wobva wadzvanya pairi Network (Inofanira kuwanikwa mumutsara wechitatu).
3. Pamusoro apa, tinya pa Yepamberi ... bhatani riri pazasi kurudyi kweiyo Network pani.
4. Chinja kune iyo DNS tabo wobva wadzvanya pane bhatani + riri pazasi peDNS server bhokisi kuti uwedzere maSeva matsva. Nyora mukero ye IP yemaseva eDNS aungade kushandisa uye pfuurira mberi Zvakanaka kupedza.
sei cortana isingandinzwe
Yakurudzirwa: Chinja Yako MAC Kero paWindows, Linux kana Mac
Ndinovimba dzidziso iri pamusoro yanga ichibatsira uye kushandisa chero yedziri pamusoro nzira iwe uchakwanisa kushandura zviri nyore kuOpenDNS kana Google DNS paWindows 10. Uye kuchinjira kune rakasiyana DNS server rakakubatsira iwe kuti udzokere kukurumidza internet kumhanya uye kudzikisa yako mutoro nguva (uye kushungurudzika). Kana iwe uri kutarisana nechero nyaya / kunetsekana mukutevera gwara riri pamusoro, ndapota taura nesu muchikamu chemashoko pazasi uye isu tichaedza kukugadzirisa iwe.
wedzera mushandisi kune windows 10 isina email
haikwanise kubatanidza kune windows kugadzirisa
mutambi asingazivikanwe nzvimbo dzehondo dzinopunzika pakutanga
taskbar pikicha yekutarisa windows 10
windows 10 inogara ichibvisa pawifi